Semalt: WordPress Themes - Zvakanaka Kuzvishandura Here?
Kana uine webhusaiti uye uwane shanduro itsva ye WordPress iyo inotarisa yakakwana uye yakakodzerwa nayo pane yakatangira dingindira, zvino unofanira kuishandura nekukurumidza. Kana iwe uchitya kuti kuchinja shanduro yeShokoPress kuchaita kuti iwe urege kurasikirwa nehupenyu hwako kana zvirongwa, iwe hauna kururama zvachose. Izwi rePeoplePress rine chinangwa chekupa nzvimbo dzedu uye maBloggi maonero asina kunaka, pasina kuvhiringidza zvigadziro uye nzvimbo yehupenyu hwedu.
The Theme Foundry ndiko kwaunogona kuwana nhamba huru yemitambo, uye chikamu chakanakisisa ndechokuti haufaniri kunetseka nezvekurasikirwa nemapurisa, mapeji, mapeji, uye mafaira. Zvose zviripo zvakachengetedzwa zvakachengetedzeka mubhuku reShokoPress, uye nheyo itsva haichazogadziri matambudziko kwauri.
Ivan Konovalov, nyanzvi yepamusoro kubva ku Semalt , achaongorora pano zvinhu zvishoma zvaunofanira kutarisa paunoshandura tambo yako yePeoplePress.
Kana wakanga uri kushandisa musoro wenyaya unobatanidza mhando dzemasimboti, unogona kuona kuti dzakawanda zvemashoko ako zvinopera pakarepo. Asi hapana chinhu chinotinetsa pamusoro pacho sezvo tsika dzemajeri emhando dzicharatidza zvinyorwa zvepamusoro-soro yemashoko pane yako WordPress account. Zvinoreva kuti unogona kudzorera zviri nyore mafaira ako uye unogona kuita kuti site yako ishande zvakanaka..Kutengesa Kuteereti kana Galleries ndiyo miviri miviri mitambo yaunofanira kuenda nayo. Rega ndiuye kukuudza kuti Postmatic, Surf Office, Yeah Dave, uye zviuru zvemabhizimisi akafanana vanoita nzvimbo dzavo ne Make, Shoko reTextPress iro rinoshandiswa uye rinoshandiswa nevashandisi.
Kana wakashandura tema yako ye WordPress, ungada kuisa menyu maitiro. Nokuda kweizvi, iwe unofanirwa kuvasika kubva paChirangaridzo → Menus chisarudzo. Inobatsira kudzora kuratidzwa kwekufambisa kwako menu uye inoita senhengo yepamusoro yechigarire. Paunoshandura mitambo ye WordPress, iva nechokwadi chekuti wakamisa menyu yako maitiro uye unodzivirira menusiti ese asina kushandiswa uye wakanyangarika kubva mumusoro wako mutsva. Iwe uchafanirwa kugovera menyu matsva yako nzvimbo chaiyo kana hurukuro yako ichishandurwa nokuti zvinyorwa zvose zvichaisa mapeji ese munzvimbo dzisina kukwana, zvichivhiringidza kutarisa kwewebsite yako.
Sezvakaita menus, majeri ako achasangana nedambudziko rekushanduka nzvimbo. Wordpress themes yakagadzirirwa kuratidzira ose akawanikwa majecha chete, uye kana uchida kuvanza kana kuratidza mamwe majenya matsva, iwe uchafanira kuzviita iwe pachako. Iwe unogona kugadzirisa zvikwereti nokufamba kuenda kuChioneka → Widgets chikamu. Kana uri kushandisa Mac, unogona kutora mufananidzo wekrini yose nekukanda Shift + Cmd + 3.
Tinoedza sei kuchinja shanduro dze WordPress?
Imwe yenzira dzakanakisisa uye dzakanakisisa dzekuongorora svondo idzva reShokoPress ndekushandisa Kushandura Kwekuona Mukuonekwa → Peji Yezvikamu. Rega ndiuye pano kuti ndikuudze iwe kuti sarudzo iyi haigoni kupa mhinduro yakarurama, saka unogona kubudisa hurukuro yako kuti uone kana zvakanaka kune webhusaiti yako kana bhulogi kana kwete.
Mhedziso - Kuchinja zvakanaka:
Ichokwadi kuti kuchinja shanduro yeShokoPress kwakanaka sezvachazoita vanhu vakawanda. Mifananidzo itsva inopa nzvimbo yako maonero matsva uye unhu hunoshamisa. Panguva imwe chete, iwe unofanira kuchengetedza mafaira ako uye gadzirira kugamuchira kuonekwa patsva kweShokoPress website Source .